Darpan Nepal – डा.केसी कहिले मर्छ भनेर धारे हात लगाउदै दिन गन्ने माफियाहरु डा.केसीको निष्ठा कहिले मर्दैन: रबि
डा.केसी कहिले मर्छ भनेर धारे हात लगाउदै दिन गन्ने माफियाहरु डा.केसीको निष्ठा कहिले मर्दैन: रबि
Jul 19, 2018adminNews0Like
आज हाम्रो कार्यक्रमको २५० औँ श्रृङखला हो । यहाँसम्म आइपुग्दा हामी कयाैं का प्रिय भयाैं र सयौँका दुश्मन भयौँ । स,सना बिषयमा ठुलो ठुलो आवाज उठाउन हामीले गरेको प्रयास जुन स्तरले हुर्किदैछ, त्यसलाई हेर्दा लाग्छ, गरे हुने रहेछ । राजनीतिक ठुला ठुला बहस चलिरहँदा सर्वसाधारणको दैनिकी किन असहज हुने ? मेलम्ची कहिले आउँछ थाहा छैन, जहिले आएपनि ठिक छ तर मेलम्ची नआउन्जेल पैसा तिरेर किनेको जारको, बोत्तलको पानीमा पनि विषादी ? आज सर्वसाधारण जनताले तरकारी खान डराउनु परेको छ, औषधि किन्दा आत्तिनु परेको छ, बाटो हिड््दा कतिखेर खाल्डोमा परेर गोडा मर्किने हो थाहा छैन, बर्खा याममा सार्वजनिक सवारी चड्न डराउनु परेको छ ।
ठुला ठुला वहसको उपादयता माथि प्रश्न गरेको होइन तर १२ रुपैयामा किसानसँग किनेको तरकारी उपभोक्ता भान्छामा पुग्दा ८० रुपैयाँ हुन्छ । सिचाइका बडेमानका योजना बनिरहँदा घर घरका समस्या बर्षौदेखि ज्युको त्यु भैरह्यो ।
बस हामी यसैमा केन्द्रित हुन चाहेको मात्र हौ तर यति जाबो झिना मासिना कुरामा बोल्ने हामी बबुराहरुको आवाजले टाउको दुखेर, केही मानिसहरु हैरान छन् । ठुला कुरा ठुला काम हँुदै गर्लान तर विजुलीको मिटर जोड्न घुस नखुवाई हुँदैन, एउटा खुट्टामा रोग छ अर्को खुट्टामा उपचार हुन्छ, सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन पुस्तक, टेबुल, कुर्सी, शिक्षक छैनन्, नीजि स्कुल पढाउन तलबले कमाइले पुग्दैन ।
परिवार पाल्नै प¥यो, औषधि उपचार गर्नै प¥यो, मर्नु भएन चिच्याउनु रुनु भएन, भएको जेथा बेचेर विदेश जान खोज्यो दलालले पैसा खाइदिन्छ । जसो तसो विदेश पुग्यो भनेको काम पनि मिल्दैन दाम पनि मिल्दैन । यो समस्या कति वर्षसम्म चलाइ राख्ने ?
कुइन्टलका कुइन्टल सुन सेटिङमा एरर्पोटबाट छिर्छ, देख्दैनन् । गरिब नेपालीले ल्याएको केही ग्राम सुनमा सरकार बल्ड्याङग्रे आँखा लगाँउछ । भुकम्पनले ढलेको घर उठाउन सकिएको छैन, बाढिले बगेका बस्तीका जनताको आँखा नओभाउँदै अर्को बाढी, ढोकै अगाडी मुख बाहेर बसिसक्यो । छिमेकी देश उसका जनता बचाउँदा हाम्रा जनता मरेको र्हेदैन, हामी छिमेकीसँग एक शब्द बोल्न सक्दैनौ बरु प्रत्येक बर्ष आफ्ना जनताको लास गन्छौ, क्षती भएका घर गन्छौ मुचुल्का उठाउँछौँ, मुद्धा कहिल्यै उठाउँदैनौँ ।
धुलो धुवाँ र हिलोमा सिंगै जेनेरेशनको कष्टप्रद जीवन वित्यो तर त्यही हिलोमा चप्पल पड्काएर टाउकासम्म हिलो पुगेको इतिहास बोकेकाहरु आज राज्यले दिएको करोड माथीको गाडी चड्ने भए ।
देश हिलो मुक्त भएन, जनता हिलो मुतm भएनन्, मात्र नेताजीको सातपुस्ता हिलो मुक्त भो धुलो मुक्त भो । एउटा सत्याग्र्रही डाक्टर आफ्नो जीवनको परवाह नगरी जनताको पहुँच स्वास्थ्य शिक्षामा पुगोस, भनेर १५ आँै पटक सम्म अनसन बस्छ, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापार बनाउनेहरु उ कहिले मछ्र्र भनेर धारे हात लगाउँछन्, दिन गनेर बस्छन् । महाशयहरु निष्ठा मर्दैन, कहिले पनी मर्दैन ।
बनाई नसक्दै भत्किने पुल, पिच गरेको २ दिनमा उप्किने बाटो, अनि असार मसान्त भित्र बजेट सक्न सत्यानास पारिएका आयोजनाका बजेट बारे बोल्दा आवाज चर्को लाग्छ भनेर नै टिभि बनाउनेले हातमै कन्ट्रोल भएको रिमोट सहितका टिभिहरु बनाएका हुन ।
इच्छा अनुसार टिभिको आवाज आँफैले घटाउन र बढाउन सकिन्छ तर हामी चाही आफ्नो आवाजलाइ मर्न परे पनि घटाउँदैनौँ । किन भने यो आवाज, अभाव, गरिबी, वेथिती, विकृती, विसंगतीले थिलो थिलो पारेको आम सर्वसाधारण नेपालीको आवाज हो जसलाई जनताले आफ्नो आवाज सम्झेका छन् ।
जनताको पैसाले चल्ने टेलिभिजन र रेडियो सिंहदरबार भित्र छ, आम मानिसले छिर्न पनि पाउँदैनन् तर दलका कार्यकता र कयौँ दलालका हर्ताकर्ताहरुले कुन्नी कसरी हो सजिलै भित्र छिर्न पास पाएका छन् ।
जनताको भोट लिएर मन्त्री बनेका व्यक्तिहरु जनतालाई बाहिर राखेर कार्यकर्ता नै कार्यकर्ताबाट घेरिएका छन् । त्यसैले हामी चाडै नै तपाइको गुनासो २४सै घण्टा सुनेर त्यस उपर काम गर्ने तयारी गर्दैछौँ ।
हामी प्रहरी बन्न खोजेका होइनौँ, न्यायाधिस बन्न खोजेका होइनौ, सरकार बन्न खोजेका होइनौ । यो समाज अमेरीका, युरोप,जापान जस्ता रुल अफ ल मा चल्न सकेको भए हामीले समाचार देखाइदिए मात्र पूग्थ्यो ।
यहाँ त घरबाट पाइला निकाले देखि राती फर्केर घर भित्र पाइला नराखुन्जेल कयौँ ठाँउमा, लुटिनु पर्छ, ठगीनु पर्छ पील्सिनु पर्छ, कमीशन खुवाउनु पर्छ ,पिटाइ खानुपर्छ, लखेटिनुपर्छ बलत्कृत हुनु पर्छ ।
केही उपाय नलागे बाध्य भएर मर्नु समेत पर्छ । गलत पात्र प्रवृत्तिको पर्दाफास मात्र गरेर ड्युटी सकियो भन्दै हामी बस्दै बस्दैनौँ बरु उल्टो आइपरे फिल्डमा प्रहरी मात्र होइन आर्मी नै बनेर उत्रिन परेपनि यो देशका लागि तयार छौँ, तैनाथ छौँ ।
प्रहरी प्रशासन र अदालतलाई हामीले इन्टरफेयर गरेका होइनौ, सहयोग गरेका हौँ । सम्मान चाहिदैन सरकार, मौका मिले कन्जुस्याई नगरी धन्यवाद दिनु भयो भने अहोरात्र खटेर लागि परेका देशै भरीका हाम्रा टिभी जर्नलिष्टहरु लगायत हामी सबैलाई अझै केही गरेर देखाउन प्रेरणा मिल्छ । यो क्यामेरा र माइक्रोफोनको सदैव सम्मान र सदुपयोग गर्नेछौँ ।
<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/YmITsrd6tDc” frameborder=”0″ allow=”autoplay; encrypted-media” allowfullscreen></iframe>
Previous Postश्रीमती हुँदा हुँदै आफ्नै दुइ छोरीहरु वलात्कार गर्ने राक्षस बाबु प्रहरी फन्दामा [भिडियो हेर्नुहोस ] Next Postचर्चित अभिनेत्री प्रियंकाले गरिन आत्महत्या